ကျနော်… ချစ်သူနှင့် လန်ဒန်ကပန်းပုဆရာ | ဥက္ကာကိုကို
ကျနော်… ချစ်သူနှင့် လန်ဒန်ကပန်းပုဆရာ	Posted by oakkarkoko on July 10, 2010
Posted in: ခံစားချက်တွေ.	1 Comment
ကျနော့်မှာ ရည်းစားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုပါစို့……. သူကကျနော့်ကိုချစ်တယ်ပြောမှာပေါ့…….
မိန်းကလေးတွေကိုမယုံကြည်သင့်ဘူးလို့ ကျနော့်ဆရာတစ်ယောက်ကဆုံးမခဲ့ဖူးတယ်….း)) ဆရာ့စကားကိုကျနော်ပယ်ရှားခဲ့တယ်လေ…… ကျနော်က အိပ်မက်တွေကိုကောက်ဆွဲပြီးလှည့်ထွက်လာခဲ့တဲ့အခါ……
ဆရာကတော့ ခေါင်းကိုပုတ်သင်ညိုလိုလုပ်ပြီး အရက်တစ်ပိုင်းကိုကောက်မော့ကျန်ခဲ့ပါတယ်…..
ကျနော်တွေးကြည့်ပါတယ်…. မိန်းမတွေဟာ… ဘယ်လိုမျိုးပါလဲလို့….. ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ် အသွယ်သွယ်ကို ကျနော်မွှေနှောက်ရပါတော့တယ်…..
နောက်ဆုံးမှာ ကျနော်သဲလွန်စတွေအနည်းငယ်သွားတွေ့ပါတယ်…. ဟာသပဒေသာကျမ်းထဲမှာပေါ့…..း))
ကောင်မလေး။ ။ ဟုတ်တယ်လေ…..
ထိုကောင်မလေးက မျက်ရည်သုတ်ပီး ရှက်ရှက်နှင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်မှာ…..
မောင်က နောက်တစ်ခါ ထပ်မကျုးလွန်ချင်တော့ဘူးလားဟင်….. ဟူသတည်း။
ယောက်ျား။ ။ ဗျာ…. ကျနော်သောက်ဖို့… ဟုတ်လား… ကျနော်တစ်ခါမှ အိပ်ဆေးမသောက်ဖူးပါဘူး…. အခုဟာက ကျနော့်မိန်းမအတွက်ပါ….
အမျိုးသမီး။ ။ ရှိပါတယ်ရှင့်… ကျမရဲ့ကလေး သုံးယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်လိုက်တာ….. တစ်ယောက်က သူနဲ့လုံးဝမတူလို့ပါ….. တဲ့…။
ဟဟ…. လာလာချည်သေးနော်….။ ကျနော့်ကောင်မလေးက ကျနော်ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကျနော်တွေးတောမိပါတယ်…..။
လရောင်ဝေတဲ့ညတွေမှာပေါ့….. ကြယ်တွေကိုရေတွက်ရင်း….. အရက်ခိုးတွေတထောင်းထောင်းထနေတဲ့ညတွေ………။
မိန်းကလေးတွေမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…. ။ ကျမကိုဖြတ်မလား…. အရက်ကိုဖြတ်မလား ဘာဘာညာညာပေါ့ဗျာ….။
ဒီနေရာမှာ ဟာသလေးတစ်ခုကို ထပ်တွေ့လိုက်ပါတယ်။
အရက်ဆိုင်ထဲသို့ အရက်မူးသမားတစ်ယောက်သည် တရှုံ့ ရှုံ့ ငိုရင်းဝင်လာသည်။ ဆိုင်ရှင်က ဘာဖြစ်လာတာလဲဟုမေးလိုက်သည်။ အရက်မူးနေသူက ငိုရှိုက်သံဖြင့်ပြန်ဖြေသည်။
ကဲ…. ဘယ်လိုလဲဗျ။ ခင်ဗျားဆိုရင်ကော ခင်ဗျားမိန်းမကို အရက်နဲ့လဲသောက်မှာလား….။ ကျနော့်ကောင်မလေးက ကျနော့်အချစ်ဟာအဲ့သလိုလို့မြင်ပုံရပါတယ်။
တချို့ နေရာကိုလိုက်လိုက်လေ့လာမိတော့…. ချစ်သူ… သမီးရည်းစား… လင်မယားတို့ကြားထဲကို အချောင်နှိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ၀င်လာတတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ချို့ရှိနေတာကို သွားတွေ့မိပါတယ်….. အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့…. အချောင်စားစိတ်ဓာတ်လေးတွေ လက်ကိုင်ထားလို့ပေါ့…..။
ခင်ရယ်… ခင်ဟာ သိပ်လှတာပဲ…. ဒါကြောင့် မောင်ကလေ… လန်ဒန်ကပန်းပုဆရာခေါ်ပြီး ရုပ်တု ထုထားချင်လိုက်တာကွာ…..။
တခဏနေသောအခါတွင် သူတို့အခန်းတံခါးကို လာခေါက်သည့်အသံကြားရသည်။ ခင်ပွန်းသည်ကမေးလိုက်၏။
အဲ့လိုလေးတွေပါ။ ဒီလိုအဖြစ်တွေနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ယောက်ျားလေးတွေ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ….။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြေရှင်းကြတာတွေ့ရပေမယ့်ကျနော်ကတော့ အဲ့လိုတွေလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ကျနော်ပဲလေ… မဟုတ်ဘူးလား။
ဥပမာပြောရရင်ပေါ့ဗျာ… ကျနော့်ကောင်မလေးက အဲ့ဒီလိုအချောင်စား လန်ဒန်ပန်းပုဆရာတွေနဲ့တွေ့နေတာကိုကျနော့်မိတ်ဆွေတွေကသိပြီး လာမေးပြီဆိုပါစို့….။
ဂရုဏာဒေါသနဲ့အပြစ်တင်ကြမယ်ဆိုပါစို့…. ။ ဒီဟာသလေးကိုပေးဖတ်လိုက်မှာပေါ့နော်။
ကားမောင်းသူ။ ။ ဟေ့လူ…. ခင်ဗျားအိမ် မီးလောင်နေတယ်မဟုတ်လား။
ကျနော်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ရောက်ရင် မိုးရွာအောင်ဆုတောင်းရမှာပေါ့ဗျာ….. လေကြီးမိုးကြီးရွာစေ…. လေကြီးမိုးကြီးရွာစေ….. ။
ပြဿနာတစ်ခုကို စိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်ရဘူးလို့…. လူတိုင်းပြောသံကြားရပါတယ်…. ကျနော်ကတော့ စိတ်နောက်ကိုမာန်ကပါခဲ့လို့ပြဿနာကြီးရပေါင်းများပါပြီ။
တုတ်တပြက်ဓားတပြက်တွေ…. ရပ်ကွက်ရုံးတွေမှာထိုးထားရတဲ့ ကျနော့်လက်မှတ်လေးတွေ….. ဆိုတော့ကာ…. နောက်ထပ်လည်း ဘာမှမဘာချင်တော့တာကြာပါပြီ။ တစ်ချို့ဆိုရင်တော့ ဒီဟာသလေးလို့လုပ်ကြမလားပဲနော်….။
ကျနော်ကတော့ တော်တော်ပေါချာချာနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ်(တကယ်တော့ သောက်ပေါလို့ဆဲကြတာပါ)။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကျနော်ရယ်နေခဲ့ပါတယ်…. ဘီလူးရယ်လေးပေါ့….. ဟိမ်းဟိမ်းဟိမ်းးဟိမ်းးးနဲ့ပေါ့….။ ကျနော်ဘယ်လောက်ထိပေါချာချာနိုင်သလဲဆိုတော့…..
ဥပမာ… ကျနော့်ကောင်မလေးနဲ့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ဘာဘာညာညာပေါ့ဗျာ…. အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ကျနော်က ဒီဟာသလေးအတိုင်းနေနေမယ့် ကောင်မျိုးလေ။
အဲလိုလေးနေနေမယ့်ကောင်စားမျိုးက ကျနော်ပါ….။း)))
ခုတော့….. မိုးနက်မည်းကြီးတွေလည်း စဲသွားပါပြီ။
ငြိမ်းချမ်းလင်းမြတဲ့ ညည့်ဦးယံမှာ မိုးဦးပေါက်အရက်တစ်လုံးနဲ့ ညည့်သုံးယံလုံးတစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ ပွင့်ဟစေခဲ့ပါပြီ……။
ကျနော်လည်း…. အေးမြငြိမ်သက်… တိတ်ဆိတ်စွာပါပဲ……..။
← ငါ့မျက်ရည်များ ပန်းပွင့်စေသား	ကျနော်နှင့် တိုက်ပွဲခေါ်သံ →	One comment on “ကျနော်… ချစ်သူနှင့် လန်ဒန်ကပန်းပုဆရာ”
kyarthi on April 9, 2011 at 11:44 am said:
I’m very proud of you man . You awesome